PressRush: Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu maka Journallọ Ọrụ Nta Akụkọ | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 31, 2015 Mọnde, Jenụwarị 21, 2019 Douglas Karr
Kwa ubochi, ana m enweta otutu otutu n’ime igbe mbata m. Edere ọtụtụ n'ime ha nke ọma, imirikiti adịghị mkpa na saịtị m, mana enwere mgbe niile ọla edo na ikpo nke spam na-eme ka m leba anya. Enwetara m olulu n’izu a ebe email gosipụtara ihe dịtụ iche ma nye m ezigbo ahụmahụ.
Enwere m ohere a iji gwa ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze na njedebe nke ọzọ banyere izi ezi nke ọkwa ahụ. Ọ bụrụ na ọ masịrị m ịma ọkwa (nke dị n'okpuru bọtịnụ ahụ), naanị m zaghachiri adreesị ozi-e sitere na ya. Kedu ụzọ dị egwu na nkwanye ùgwù pụtara ndị ọkachamara mmekọrịta ọha na eze iji hụ na mkpa dị na onye na-emetụta ma ọ bụ blogger ha na-ekwurịta okwu.
Ka m na-aza ọkwa a kapịrị ọnụ, achọpụtakwara m n 'ikpo okwu edere ya - Pịa. Site na Pressrush, ịnwere ike ịtọ ọkwa na isiokwu, mepụta ọkwa, ndị nyocha nyocha, ma mepụta ndepụta ahaziri iche iji zipụ. Ma mgbe ezigara gị ọkwa, ha na-eji usoro m kọwara n'elu.
Ekwenyesiri m ike na ihe ngwọta abụghị iziga ndị ọzọ. Ihe ngwọta bụ iwulite mmekọrịta na-adịgide adịgide na-amalite site na nke onwe, nyochachara nke ọma, lekwasịrị anya nke ọma, yana izi ezi oge. Site na PressRush, agbalịrị m wuo ngwa ọrụ iji nyere gị aka ime nke ahụ. Ville Laurikari, Onye guzobere Pressrush.
Iwuli ihe di mfe site na iji engine n’ime n’ime ndi oru nta akuko. Nke a bụ nsonaazụ maka nyocha na metrik, ebe ichotara nke gi n'ezie:
Ma ọ bụrụ na ị pịa profaịlụ m, ị nwere ike ịnweta ozi ọhụụ niile m bipụtara yana njikọ nke profaịlụ mmekọrịta m na adreesị ozi-e.
Ebumnuche nwere ike ịmegharị site na afọ, ọnọdụ na mbipụta. Enwere ike ịhazi ha site na ịkọ ma ọ bụ dị mkpa. Ozugbo inyochaa onye nta akụkọ ọ bụla, ịnwere ike itinye ha na ndepụta mgbasa ozi akọwapụtara nke enwere ike ibudata ma ọ bụ seta ya. Kasị mma, dị ka ozi kọntaktị na-agbanwe, ndepụta gị na-edobe oge.
Banye maka a Pressrush Trial
Tags: gaa blogger outreachakukoije ozigboozi ịntanetịnyocha ọhụụpịaVille Laurikari